Indlu yokulala yeholide - I-Airbnb
Indlu yokulala yeholide
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguIsabella
Shi imithi yeminquma yamandulo, 1km ukusuka kusasa no-2 km ukusuka elwandle, belibona studio indlu nembono ulwandle masimu apho utyele ngaphandle kunye sunbathe.The studio has a nekhitshi exhotyiswe zonke izinto, lokuhlambela kunye kwishawa bidet flat TV screen kunye umoya opholileyo xa uceliwe.
Kuyenzeka ukuba uthathe uhambo olude ngaphakathi kwipropathi, uwedwa kwaye wonwabele indalo entle, etyebileyo kwizityalo ezimangalisayo.
I-Penthouse kumgangatho wesibini malunga ne-35 square metres, equka indawo yokuhlala enekhitshi kunye nebhedi ephindwe kabini, iTV, ifriji, igumbi lokuhlambela, kunye ne-terrace enkulu emalunga ne-60 square metres apho ungatya khona ngelixa usonwabela umbono oqaqambileyo weMatinata. ibheyi
Ligumbi elinophahla elimalunga neemitha ezingama-800 ukusuka kwidolophu yaseMattinata, lijikelezwe yimithi yomnquma yeenkulungwane zakudala. Yindawo entle yokuphumla kunye nokutshaja kwakhona. Ulwandle lwaseMattinata lumalunga neekhilomitha ezi-2, lufikeleleka lula ngemizuzu emi-5 ngemoto
Umbuki zindwendwe ngu- Isabella
Ndihlala ndikhona ukuze ndinxibelelane neendwendwe kunye nokubanceda ngayo nayiphi na imfuno enokwenzeka
Inombolo yokunxibelelana nam ngu-3485455721
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mattinata